‘स्वर्ण महोत्सव काँकरभिट्टा माविको इतिहास बुझ्न नयाँ पिँढीलाई अवसर’ - विवेचना
January 27, 2018 809 Views
तुलसीप्रसाद निरौला, प्रधानाध्यापक : काँकरभिट्टा मावि
झापाको मेचीनगर-६ स्थित काँकरभिट्टा माविले स्थापनाको ५० औं वर्षगाँठको सन्दर्भ पारेर स्वर्ण महोत्सव मनाइरहेको छ । यही माघ २ गते औपचारिक रुपमा महोत्सव उद्घाटन भई आइतबार एक विशेष समारोहका बीच विधिवत समापन हुँदैछ । महोत्सवको पेरिफेरिमा रहेर विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलसीप्रसाद निरौलासँग विवेचनाकर्मी विमर्श उप्रेतीले गरेको कुराकानी :
स्वर्ण महोत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
स्वर्ण महोत्सव माघ २ गते नै उद्घाटन भइसकेको छ । अहिले विद्यालयमा महोत्सव लक्षित विविध अतिरिक्त क्रियाकलापहरु जारी छन् । आइतबार महोत्सव औपचारिक रुपमा समापन हुँदैछ । समापनका अवसरमा हामी विशेष समारोह आयोजना गर्दैछौँ । विद्यालयको इतिहास नयाँ पिँढीले पनि बुझुन् भन्नका लागि इतिहास छर्लङ्ग पानर्‌ स्मारिका प्रकाशन गरेका छौँ । स्वर्ण स्मारक स्तम्भ पनि निर्माण गरिएको छ । जुन यसै विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक एवम् शिक्षासेवी दिलीप अधिकारीले ४ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिदिनुभएको हो । महोत्सवको तयारी लगभग पूरा भइसक्यो । यो ऐतिहासिक स्वर्ण महोत्सवलाई सभ्य र भव्य रुपमा मनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षकशिक्षिकाहरु अनि विद्यार्थी निरन्तर जुटिरहनुभएको छ ।
महोत्सवलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्वर्ण महोत्सव विद्यालयका निम्ति आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । विद्यालयले ५० औं वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दा हामी गौरवान्वित अनि हर्षविभोर छौँ । सेउलाको कटेरोबाट शिक्षाको ज्योति छर्न सुरु गरेको यो विद्यालयले वर्तमानमा आइपुग्दा अनेकौं आरोह अवरोह पार गरिसकेको विदितै छ । यो विद्यालय सिङ्गो काँकरभिट्टाबासीको साझा सम्पत्ति, गौरव अनि प्रतिष्ठाको जीवन्त इतिहास हो । त्यस अर्थमा पनि महोत्सवको सुसम्पन्न गर्न पाउँदा अहिलेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अध्ययनरत् विद्यार्थी अनि अध्यापनरत् शिक्षक वर्ग हामी सबै भाग्यमानी छौँ । विद्यालयको अहिलेसम्मको गरिमा र शाखलाई जोगाउँदै यो ऐतिहासिक अवसरको जगमा उभिएर विद्यालयको शैक्षिक यात्रामा नयाँ आयाम थप्ने, शैक्षिक उचाईका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं । विद्यार्थीको शैक्षिक विकासलाई थप मजबुत बनाउँदै उनीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत अझ निपूर्ण बनाउने नयाँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने हाम्रो रणनीति छ ।
महोत्सवमा अहिले के कस्ता क्रियाकलापहरु हुँदैछन् त ?
विद्यार्थीहरुको अर्न्तनिहीत प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्देश्यले अहिले विविध गतिविधि भइरहेका छन् । यसमा विद्यालयमा गठित बाल क्लब अनि विद्यार्थी सक्रिय छन् । अहिले फेसन शो, बाल नृत्य, बेलुन फुटाउने कार्यक्रम, सामुहिक गायन एवम् नृत्य, एकल गायन तथा नृत्य, खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप, अन्तर सदनात्मक मार्चपास, चित्रकला, गायन, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा छन् । संकायगत भलिबल, वक्तृत्वकला, कविता, गायन, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता हुँदैछ भने खुल्ला कविता प्रतियोगिता पनि राखेका छौँ । विभिन्न मिटरका दौड, ज्याब्लिन थ्रो, छेलोलगायत प्रतियोगिता भइरहेको छ । अभिभावकका लागि पनि खेल तय गरेका छौँ ।
विद्यालयको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ ?
२०२४ साल माघ १४ गतेका दिन विद्यालय स्थापना भएको थियो । त्यो बेला तीन जना शिक्षकले पढाउनुहुन्थ्यो । १ देखि ३ सम्म पढाई हुन्थ्यो । संस्थापक प्रअ बुद्धिनाथ पौडेल अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । विद्यालयले ५० वर्षमा पाइला टेकेको छ । अहिले हामीमाझ तीन जना पूर्व प्रअ हुनुहन्छ । उहाँहरुले विद्यालयको जीवित इतिहास बनेर विद्यालयको श्रीबृद्धिका लागि हामीलाई ऊर्जा अनि प्रेरणा थपिरहनुभएको छ ।
Previous स्वर्णजयन्ती र कौवाको अपसगुन
Next बेलबारीमा यसरी लाग्यो कुद्दै गरेको मारुतीभेनमा आगो